ကလေးဒေသထွက် စိန်တလုံးနှင့် ပတ္တမြားသရက်သီးများ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်က အများဆုံ - Yangon Media Group
ကလေး၊ ဇူလိုင် ၈
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကလေးဒေသတွင်းစိုက်ပျိုးထွက်ရှိသည့် စိန်တလုံးနှင့် ပတ္တမြားသရက်တို့ကို ပြီးခဲ့သည့် နှစ်များက မုံရွာ၊ မန္တလေးဈေးကွက်နှင့် တရုတ်နယ်စပ်ဈေးကွက်က အများဆုံးဝယ်ယူမှုရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် တမူးနယ်စပ်ဈေးကွက်နှင့် ချင်းပြည်နယ် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ်နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှအများဆုံးဝယ်ယူနေကြောင်း သိရသည်။
”ကလေးဒေသမှာ ရာသီအလိုက် သီးနှံစုံထွက်တယ်။ နယ်စပ် ဈေးကွက်တင်ပို့ရောင်းချဖို့ကလည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် ဒေသထွက် ပန်းသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ထောပတ်သီး၊ သရက်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ရာသီအလိုက် အသီးအနှံစုံဝယ်ပါတယ်။ ရောင်းပါတယ်။ အခုနှစ် ကလေးဒေသက စိန်တလုံးသရက် အထွက်နည်းတယ်။ ပတ္တမြားသရက်အထွက်များတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပွဲရုံကို နေ့စဉ်သရက်သီးသေတ္တာ အလုံးရာချီဝင်တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်းသေတ္တာရာချီပြီး ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့တယ်။ အခုနှစ် အများဆုံးတင်ပို့ရောင်းချရတာကတော့ ရိဒ်နယ်စပ်နဲ့ တမူးနယ်စပ် ဈေးဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကလေးမြို့ ကိုဝင်းမင်းသန်း၊ မချိုချိုမွှေး (ချိုမွှေး) သစ်သီးစုံရောင်းဝယ်ရေးပွဲရုံပိုင်ရှင်က ပြောသည်။
ယခုရက်ပိုင်း တမူးနှင့် ရိဒ်နယ်စပ်ဈေးကွက်တွင် ကလေးဒေသထွက် သရက်သီးသေတ္တာရာချီ၍ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီး သရက်သီး သေတ္တာတစ်လုံးလျှင် သရက်သီး အလုံး ၇ဝ မှ ၁ဝဝ ဝန်းကျင်အထိပါဝင်ရာ အလုံး ၁ဝဝ ပါ စိန်တလုံး သရက်သီးသေတ္တာ တစ်လုံးလျှင် နယ်စပ်ဈေးတွင် ကျပ် ၄၂ဝဝဝ ဝန်း ကျင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီး ယခုရက်ပိုင်း အရောင်းအဝယ်သွက် နေသည့် ပတ္တမြားသရက်အလုံး ၁ဝဝ ပါသေတ္တာတစ်လုံးလျှင် ကျပ် ၂၇ဝဝဝ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်။ ကလေးဒေသတွင် သရက်မျိုး စုံစိုက်ပျိုးသူဦးရေ ၅ဝ ဝန်းကျင်ရှိ ပြီး စိုက်ဧကထောင်ချီရှိကြောင်း၊ ကလေးမြို့နယ်ရှိ ထိုမာ၊ ထောက် ကြန့်၊ စခန်းကြီး၊ အင်ဒိုင်းကြီးကျေးရွာများဝန်းကျင်တွင် သရက်ခြံစိုက် ပျိုးမှုများပြားကြောင်း ဒေသခံ ဦးခင် မောင်မြင့်က ပြောသည်။
မန္တလေး ပဲဈေးကွက်တွင် ကုလားပဲ အုပ်စုဝင်များ ဈေးနှုန်း ကျဆင်းလာပြီး ပဲစင်းငုံနှင့် မတ်ပဲတု?
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင်ပါသော နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို ကျော်လွန်တားဆီးသည့် ဒေသန္တရအမိန်??
ကမ္ဘာ့မြစ်ကြီးများတွင် ပဋိဇီဝစွန့်ပစ် ပစ္စည်းများဖြင့် ပြည့်နှက်နေကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ခုတွင??
ပြည်ပကျူးကျော်စစ်ကို တိုက်ခိုက်သည့်အသွင် တပ်မတော်(ကြည်း)နှင့် (လေ) အမြောက်နှင့်သံချပ်ကာ ပူး
လီဗာပူးပေးခဲ့ရသည့် ဦးဆောင်ဂိုးမှာ ဗန်ဒိုက်၏ အမှားဟု ဝင်းဂါးဝေဖန်ပြစ်တင်